यसरी गर्नुस् जीवन परिवर्तन « Sansar News
२१ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०४:३५
कहिले काहिँ लाग्छ जीवन कहाँ रोकिएको छ ? किन रोकिएको छ अनि जीवनको गतिमा के मिलिरहेको छैन ? हामी यस्तै सोँचाइमा डुब्ने गर्छौ । यद्यपी जीवनलाई सहि गति दिन हामीले आफ्नो सोँचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ । नआत्तिनुस स–साना बानीहरू परिवर्तन गरेर जीवनलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । त्यसैले आउनुस जानौँ जीवनमा आफूलाई शसक्त बनाइ रहनका लागि के गर्ने ?